Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Inkukhu Burgers ngu Longo Ngoku Uyakhumbula
I-Belmont Meat Products Ltd. ikhumbula i-brand ye-Longo ye-Chicken Burgers kwindawo yentengiso kuba isenokuba neqanda elingachazwanga kwileyibhile. Abantu abane-allergies kwiqanda akufanele batye imveliso ekhunjulwayo echazwe ngezantsi.
Le mveliso ilandelayo ithengiswe e-Ontario.
EzikaLongo Iinkukhu Burgers 852 g (6 x 142 g) 7 72468 03418 6 Eyona nto ingcono ngaphambi kuka-2022 MR 09 2022 MA 13 2022 JN 28
Ukuba unokwaliwa kwiqanda, sukuyitya imveliso ebuyisiweyo njengoko inokubangela ukusabela okumandundu okanye ubomi esichengeni.
Oku kukhumbula kubangelwe ziziphumo zovavanyo lweArhente yokuHlolwa kokutya eCanada (CFIA). I-CFIA iqhuba uphando lokhuseleko lokutya, olunokubangela ukuba kukhunjulwe ezinye iimveliso. Ukuba ezinye iimveliso ezinobungozi obukhulu ziyakhunjulwa, i-CFIA iya kwazisa uluntu ngohlaziyo oluLumkisayo lokutya.
Ukuphendula Akukho zimpendulo zixeliweyo ezinxulumene nokusetyenziswa kwale p